Yiziphi izigaba zokuqukethwe ezibandakanya kakhulu i-inthanethi neselula? | Martech Zone
Abathengisi bokuqukethwe bangafuna ukunaka okwakamuva I-AddThis ukuhlaziywa kokuqukethwe kokuqukethwe kumadeski nakumadivayisi eselula. Ukuhlaziywa kwe-Q3 yenkampani kuveze ukuthambekela nokuziphatha okuthokozisayo uma kukhulunywa ngokuqukethwe abathengi abahlanganyela kakhulu kukho, lapho behlanganyela khona, nesikhathi sosuku kungenzeka ukuthi bakubuke.
Ngokuvumelana ne Engeza lokhu, imikhakha yokuqukethwe ebone ukubandakanyeka okuningi kuselula bekungumndeni nokuba ngumzali ngokuqukethwe okuhlobene nokukhulelwa okuheha ithrafikhi engaphezulu kwamaphesenti ayi-187 kusuka kuselula. Lokhu kwalandelwa ukuthengisa ngamaphesenti angu-6.3 omgwaqo nokuhamba ngamaphesenti angu-6.1 omgwaqo ohambahambayo.
Uma kukhulunywa ngokuqukethwe kweselula, imikhakha ebone ukubandakanyeka okuningi, njengoba kuchazwe ukubukwa kwamakhasi ngaphezulu kwekota kwakungumndeni nokuba ngumzali, ukuhamba nokuthengisa. Ngokuqondile, okuqukethwe okuhlobene nokukhulelwa kubonwe ngaphezulu kwamaphesenti we-187 traffic kusuka kuselula. Okuqukethwe okuthengiswayo kuthole amaphesenti angu-6.3 ethrafikhi yeselula futhi okuqukethwe kokuhamba kuthole amaphesenti angu-6.1 omgwaqo ohambahambayo.
Ngenkathi ithrafikhi yeselula iqhubeka nokukhuphuka - inkampani ibike ukuthi ithrafikhi kamakhalekhukhwini kwinethiwekhi yayo inyuke kancane kancane ngamaphesenti ayisithupha inyanga ngayinye kulezi zinyanga eziyisithupha ezedlule - kunezigaba ezithile zokuqukethwe abathengi abavame ukuzibheka kakhulu kumatafula abo. Lokhu kufaka phakathi ezezimali nezemfundo yomuntu siqu. Ngokusho kwe-AddThis, kwikota yesithathu, okuqukethwe kwezemfundo kubona ithrafikhi engaphezulu ngamaphesenti angama-74 kusuka kumakhompyutha wedeskithophu namaphesenti angama-64 omthamo kuya kokuqukethwe kwezezimali komuntu okwenzekile kwideskithophu.
Ngokwengeziwe, ukuhlaziywa kutholile ukuthi ukusetshenziswa kwe- ipolitiki nemicimbi yamanje iphakama phakathi kuka-5AM no-8AM ngenkathi i- isitayela & imfashini nokuzijabulisa izigaba kudonse isiminyaminya esikhulu phakathi kwehora lesithupha ebusuku naphakathi kwamabili.
Sekukonke, izigaba eziphezulu eziyishumi zokuqukethwe ezivame ukwabiwa kwiWebhu evulekile phakathi nekota yesithathu, ngokusho kwe-AddThis, ukuhamba, ezombusazwe (akumangazi ngoba sinokhetho lwaphakathi nonyaka), ikhaya, ezemidlalo, ukudla, ezempilo, ezezimali, isitayela nemfashini, ubuciko obuhle nemfundo - ngaleyo ndlela.
I-Facebook, i-Twitter kanye ne-Facebook Likes zihlala ziyizinsizakalo ezintathu zokwabelana ezihamba phambili ngekota-ngaphezulu kwekota. Ukuhlaziywa kwakususelwa kwiziphequluli zeWebhu ezihlukile nezingaziwa eziyizinkulungwane eziyi-1.7 kumadeski nakumadivayisi weselula ayizigidi ezingama-720 kusuka ngoJulayi 1 kuya kuSepthemba 30, 2014.
Tags: 2014engeza lokhuimikhakha yokuqukethweImfundolwekucocisanaezezimaliubuciko obuhleukudlaImpiloikhayaezombusazweq3Ezemidlaloisitayela nemfashinitravel